Waa maxay Qiimeynta IP (Ilaalinta Ingress) - - Ningbo Joiwo Joiwowo Xaqiijinta Qarax Isgaarsiinta, LTD
Telefoon hawada celiya
Telefoonka Qarxinta Proofion
Telefoonka VoIP ee Warshadaha
Xalka Shirkadaha Warshadaha
Waa maxay Qiimeynta IP (Ilaalinta Ingress)?
WAQTIGII: 2019-12-11 HITS: 61
Qiimeynta IP-ga waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Ilaalinta Ingress ama qiimeynta Caalamiga ah ee lagu qeexay heerka caalamiga ah ee EN 60529 (British BS EN 60529: 1992). Heerkani waxaa loo isticmaalaa in lagu qeexo heerarka wax-u-qabashada shaabadaynta ee ku xirnaanta korantada ee ka dhanka ah ku-xadgudubka hay'adaha shisheeye sida aaladaha, wasakhda iyo qoyaanka.
Maxay ka dhigan yihiin labada lambar ee ku jira Qiimaynta IP?
Qiimeyntu waxay ka kooban tahay xarfaha IP oo ay ku xigto laba lambar, haddii lambar lagu beddelay X tani waxay muujineysaa in xayndaabka aan lagu qiimeyn qeexitaankaas.
Labada lambar waxay matalaan qaabab kala duwan oo saameyn deegaanka ah:
• Lambarka koowaad wuxuu u taagan yahay kahortagga soo gelida walxaha adag.
• Lambarka labaad wuxuu u taagan yahay kahortaga soo galista dareerayaasha.
Waa maxay Qiimeynta IP ee Aan Doorto?
Haddii aadan ka sii saadaalin deegaan cimilo aad u daran oo qoyan ama qoyan markaa qiimeynta IP hoose ayaa ku filan.
Meelaha ay yeelan doonaan boodh badan, qashin burburin, ama suuragal ah inay la xiriiraan wixii cabitaanno ah ama cabitaanno ah, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in qiimeynta IP-ga ay sarreeyaan oo aad haysatid biyo kugu filan oo adkayn kara ama jaakadaha biyuhu ka samaysan yihiin ee deegaankaaga. .
Waxaan nahay soo saare xirfadlayaal ah taleefannada aan biyuhu soo gaarin. Waxaan ku siin karnaa noocyada analog iyo ip. Waxaan sidoo kale ku habeyn karnaa telefoonka hadba baahidaada. Taleefanadeena ayaa gaari kara darajada difaaca biyuhu u galaan ee IP66 ， IP67 xitaa IP68. Waxaad ku isticmaali kartaa taleefannadeena warshadaha, banaanka, awooda nukliyeerka iyo warshadaha kiimikada.
Telefoonkeena cadeynta Qaraxyada JWAT811 waxaa lagu xiray Talyaaniga
Ma waxaad dooneysaa mashruuc taleefoon gacmeed?
SAXIIX IYO SAXIIX!Bixinta iimaylka gaarka ah & takhasuska waqti dhimista xadidan
Naga soo wac Si lacag la’aan ah+ 86-13858200389
Ningbo Joiwo caddeynta Qaraxyada Technology Co., LTD
Adress: Maya. 8 Wadada Dhexe Guoxiang Buundada Lanjiang Street Yuyao Zhejiang
Xuquuqda daabacaadda © 2020 Ningbo Joiwo caddeyn Qarax ah Technology Co., LTD. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh. P ICP 备 14038348 号 -1